Ungayisebenzisa Kanjani Imodi Ye-YouTube Incognito? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ubuwazi ukuthi i-YouTube ifaka imodi ye-incognito phakathi kwemisebenzi yayo? Uma ungazi ukuthi leli thuluzi lisho ukuthini nokuthi lenzelwe ini, sikumema ukuthi ufunde i-athikili elandelayo lapho sizochaza khona ukuthi imodi ye-incognito ye-YouTube imayelana nokuthi singayisebenzisa kanjani emizuzwini embalwa.
Lena enye ye amathuluzi angcono kakhulu ahlinzekwa uhlelo lokusebenza lweselula lwe-YouTube futhi lokho kusebenza ngokungakushiyi umkhondo wokuqukethwe esikubukayo ngeplatifomu ethandwayo yokusakaza ividiyo. Hlala nathi futhi ufunde ukuthi ungasisebenzisa kanjani lesi sici esimangalisayo.
Iyini imodi ye-YouTube incognito
I-Youtube isanda kwethula le nketho entsha ngezinhlelo zayo zeselula futhi abasebenzisi bangayivula futhi bayicime noma kunini lapho bafuna khona. Imodi ye-incognito isebenza kakhulu ukuvimbela ipulatifomu ekulondolozeni umlando wawo wonke amavidiyo esiwabukayo kungxenyekazi.
Lapho senza kusebenze imodi ye-incognito ye-Youtube sizokwenza njalo vimbela umlando wevidiyo ukuthi ungalondolozwa kudivayisi yethu yeselula esikhiqiza kabusha. Futhi, susa konke ukwenza ngezifiso.
Kusho ukuthini lokhu? Sizovimbela uhlelo lokusebenza lwe-YouTube ukuthi luqale phakamisa okuqukethwe okufana nalokhu ebesikubuka ezinsukwini ezimbalwa ezedlule emsamo. Manje izincomo ezenziwe yi-YouTube zizoba ezijwayelekile.
Uma imodi ye-incognito ye-YouTube yenziwe yasebenza nayo sizokugwema ukubuka amavidiyo weziteshi esibhalise kuzo. Lokhu kwenzeka ngoba okubhaliselwe, Amabhokisi Okungenayo namathebhu Womtapo Wezincwadi nakho kukhutshaziwe lapho kwenziwa lesi sici.
Izinyathelo zokusebenzisa imodi ye-incognito
Ngiyaphila. Manje njengoba sesazi ukuthi imodi ye-incognito isho ukuthini nokuthi yenzelwe ini, sizokufundisa indlela elula futhi esheshayo yokusebenzisa leli thuluzi elithakazelisayo lokho kufake i-YouTube ohlelweni lwayo lweselula.
Into yokuqala okufanele icaciswe yilokho lesi sici sinikwe amandla wensiza yeselula kuphela, okusho ukuthi ngeke sikwazi ukukusebenzisa kusuka kunguqulo yedeskithophu. Nazi izinyathelo okufanele uzilandele:
chofoza mayelana nesithonjana sesithombe sakho sephrofayela
Uzoya ngokuzenzakalela kumenyu ye-Akhawunti. Lapho uzokwazi ukufinyelela kuzinketho ezahlukahlukene ze ukumisa.
Manje kufanele uchofoze kunketho "Nika amandla imodi ye-incognito"
Ungayikhubaza kanjani imodi ye-incognito
Ngabe ukuthole kulula kakhulu ukwenza kusebenze imodi ye-incognito? Le yindlela elula futhi esheshayo okuzoba ngayo ukuvula leli thuluzi kusuka kuhlelo lokusebenza lweselula. Lapha sichaza isinyathelo ngasinye okufanele sisilandele:
Vula isicelo se-Youtube kusuka kuselula yakho
Uzobona ukuthi isithombe sakho sephrofayela asisaveli esibukweni. Esikhundleni salo kuzoba yi uphawu lwemodi ye-incognito.
Chofoza kuleso sithonjana bese ukhetha "Khubaza imodi ye-incognito"
Yileyo ndlela osheshe ngayo ukuphuma kwimodi ye-incognito Futhi manje uhlelo lokusebenza luzoqala ukonga wonke umlando wamavidiyo owabukayo ngohlelo lokusebenza lweselula.
1 Iyini imodi ye-YouTube incognito
2 Izinyathelo zokusebenzisa imodi ye-incognito
3 Ungayikhubaza kanjani imodi ye-incognito
Uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu lokuthola ababhalisile ku-YouTube